Amafama amathathu nomGrike sebelungele ukusuka eKapa besiya Cairo – Grocott's Mail
You are at:Home»Uncategorized»Amafama amathathu nomGrike sebelungele ukusuka eKapa besiya Cairo
Amafama amathathu nomGrike sebelungele ukusuka eKapa besiya Cairo
By _Gr0cCc0Tts_ February 23, 2011 1 Comment2 Mins Read
Aba bane base Adelaide bagqibe ekubeni khe bacande izwekazi leAfrika behamba ngezithuthuthu zabo ukusuka eKapa besinge eCairo, kwiphulo labo lokwenzela isibhedlela saseAdelaide imali beqinisekisa kananjalo ukuba imeko yezonyango yalangingqi iyancomeka.
Ingingqi yaseAdelaide kunye needawana eziyingqongileyo inabantu abaqikelelwa kumashumi amathathu amawaka (30 000). Kuba ke ikude kangangeekhilomitha ezikumakhulu amabini kwisibhedlela sengingqi, kufuneka ibonelele abantu abakufuphi ngeemfuno ezingxamisekileyo kuledolophu neendawo eziyiphahlileyo.
Phaya kutsho ko 1950, emva kokuba urhulumente eye wala ukwakha isibhedlela phaya, abantu balengingqi bathi bafikelela kwisigqibo sokusakha ngokwabo isibhedlela. Nangona ke urhulumente esixhasa esi sibhedlela, inkxaso yasekuhlaleni idlala indima enkulu ukuvala apho urhulumente ashiye kukho imbobo khona.
Ukongeza koku, isibhedlela siding ngokukhawuleza ulwangezo lwendawo egcina amanzi nexamisa malunga ne1.2 yezigidi zerandi. Phantsi kwemeko zembalela, amanzi kuye kunyanzeleke ukuba utsalwe ngeemstshini kwiFish River eCookhouse, nemalunga ne 52 km incediswa ngumthombo olapha edolophini.
Kumaxesha ngamaxesha ke esi sibhedlela sithi sishotelwe ngamanzi ngenxa yokungabinamali yaneleyo ukumelana neemfuno zamanzi. Phantsi kwezi meko ke, iiwadi kunyanzeleka ukuba zivalwe ze nezigulana zijikwe meko leyo ingentlanga ncam for abantu basekuhlaleni.
Kwinyanga ezintandathu ezidlulileyo, usomashishini wasekuhlaleni uStelios Georgious, uthe ethetha nabanye abahlali uRichard Bennett wambalisela ngalembono yakhe yokuqhuba isithuthuthu sake ukusuka eKapa esiya eCairo. Emveni kokuba uRufus Dreyer noNorman Emslie befune ukubayinxalenye yoluhambo – nosele belujike lwabayiprojekthi ukunyusela imali esi sibhedlela – oko ibekukuzalwa kwephulo nabalibize ngokuba yi “Three Farmers and a Greek, Cape Town to Cairo Motorbike Adventure”
Kungekudala ke aba bobane bathe bathenga izithuthuthu zabo zeKawasaki KLR 650 bakugqiba bazilolonga eBaviaanskloof eSwartberg Pass ukuhla ukuya eGamkaskloof ze babuyela eAdelaide. Ukusuka eKapa, oluhambo lwabo luntsuku zimashumi mane anesihlanu, luzakubacandisa eNamibia, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Sudan kunye naseEgypt nalapho bazakuthi basfumane inkxaso mali yekilomitha nganye ukuqinisekisa imeko yezonyango yesisibhedlela.
Bazinikele ke ekuhambeni malunga ne 13 000km. Eliqela lizakunduluka ngomhla wama 31 March 2011 kwaye abo bafuna ukujonga inkqubela yabo bangenza njalo ngokubajonga ku Wild Dogs Adventure Forum nakwi blog yabo.
Siyakukhuthaza ke ukuba ulandele okuhambo lwabo kwaye ubaxhase kweli linge lokunyusa le mali ukuhlangula isibhedlela saseAdelaide. Nabanina onqwenela ukwenza inkxaso angaqhakamshelana noJan van der Westhuysen ku 082 8534 906, imeyile: docjan@africareal.co.za, okanye uEric Wright, noyintsumpa yesibhedlela ku 046 684 0006, imeyile: adelhosp@mweb.co.za
Previous ArticleBaart aims to get municipality back on track
Next Article RMR goes off air